Koob caano ah xilliga suxuurta waxa uu kaaga filan yahay inaad gaajooto - Horn Future
Dhakhtar Turkish ah ayaa sheegay in cabitaanka hal koob oo caano ah xilliga suxuurta bisha Ramadaan uu ka caawinayo in uunan dareemin bini’aadanku gaajayo muddo 5 saacadood ah.
Madaxa Kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Dumlipinar ee gobolka Kutahya ee Turkey Dr. Axmed Hakan,ayaa waxa uu kula taliyay dadka sooman bisha barakaysan ee Ramadaan inay cabaan caanaha iyo nuuca loo yaqaano “Ayran”afturka iyo suxuurta,waxana uu ku tilmaamay “cabitaanka Ramadank ee lagama maarmaanka ah,”.
Caanaha nuuca “Ayran” loo yaqaano ayaa ah kuwo lagu laaqo/qaso biyo,ka dibna lagu daro milix.
Dr. Hakan ayaa faahfaahiyay caanaha iyo waxyaabaha laga saaro in aynan ku koobnayn kaliya inay muhiimad u leeyihiin caruurta, laakiin sido kale waxa ay dadka waaweyn u leeyihiin faa’iidooyin, iyada oo dhab ahaan caanuhu ay yihiin midka mid ah ilaha ugu cuntada aasaasiga ah ee da’aha kala duwan ee bini’aadanka.
Waxa dhakhtarku uu tilmaamay baahida loo qabo in la cabbo 1 litir oo caano ah maalintii ugu yaraan, waxana uu carabka ku adkeeyay inay maadadan cuntada ah ay ku jiraan tiro badan oo (protein)ah ,isla wakhtigaas waa cabitaan aad lagama maarmaan ugu ah qofka.
Dr. Hakan ayaa waxa intaa ku daray in “caanaha ay ku jiraan tiro ku filan oo( calcium) ah, taas oo muhiimad weyn u leh lafaha,waxaanan u baahan nahay tiro badan inta lagu guda jiro maalmaha soonka,”.
« Sheekh Cabdiraan:Maxaan ka faa’iidaysanaynaa Ramadaanka cashiro taxane ah+daawo	» Turkey oo gaadhsiisay gargaar cuno ah magaalada Taciz ee Yemen bisha Ramadaan